XOG+AKHRISO: Heshiisyada aan fulin ee horey u dhexmaray Jubbaland & DF Soomaaliya, maxaa kamid ah?
MUQDISHO(P-TIMES) – Ka dib dagaalo ka dhashay dhismihii maamulka Jubbaland ee dhexmaray qaar kamid ah mucaaradkii diidanaa dhismaheeda iyo ciidamo daacad u ahaa Madaxweynaha hadda xilka haya ee Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, ayaa heshiis ay ku gaareen dhinacyadu magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya.
Nuxurka qodobada heshiiskaas, waxaa ku jiray kuwa taabanaya ilaha dhaqaalaha, sugida Ammaanka iyo arrimaha ku wajahan geedi socodka Jubbaland ay uga bixi lahayd hanaanka KMG oo ahaa in la raaco wadiiqooyin ay goobjoogayaal ka ahaayeen beesha Caalamka.
Dawladda Itoobiya oo ahayd cidii dhexdhexaadisay labada dhinac ayaa goobjoog ka ahayd saxiixa heshiiska, gaar ahaana damaanad-qaaday sidii uga fuli lahaa labada dhinac, waxayna hadda garwadeen ka tahay qorshaha dawladda Faderaalka.
Qodobada xasaasiga ah ee heshiiska waxaa kamid ahaa in ay Jubbaland ku wareejiso mudo dhan lix bilood gudahood maamulka dekeda iyo garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo, waxaana qodobkaas u qornaa.
“Maamulka dekadda iyo Garoonka waxaa lagu wareejinayaa dowladda Federaalka muddo lix bilood ah gudaheed, iyada oo wixii markaasi ka dambeeya ay dowladda Federaalka ay usoo magacaabayso guddi maamul tayo leh iyada oo lala tashanayo maamulka KMG ah ee Jubba. Iyada maamulka hadda jira ee dekada uu sii shaqaynayo muddo lix bilood ah. Dowladda Federaalka ayaa soo magacaabaysa saraakiisha socdaalka kuwaasi oo tagaya dhamaan xuduudaha iyo meel kasta oo dalka laga soo galo” ayaa lagu yiri heshiiska.
Sidaas oo kale qodobada ku saabsan dhismaha baarlamaanka iyo golaha wasiiradda oo ahaa kuwa xasaasi ah ayaa heshiiskaas lagu qeexay cidda leh masuuliyadda, waxaana qodobka 8aad ee heshiiskaas uu dhigayey in Golaha Wasiiradda sidan loo magacaabayo.
“Golaha Fulinta waxa ay noqonayaa kuwa wax fulinaya maamulka dhexdiisa, xubnaha golahana waxaa magacaabaya hogaamiyaha maamulka, isaga oo la tashanaya, islamarkaasina ay isu duweyso dowladda Federaalka. Dowladda Federaalka waxay mas’uul ka noqoneysaa xaqiijinta in maamulkaasi uu noqdo mid dadka ka wada dhex muuqdaan oo aanan cidna laga tagin” ayuu qorayaa heshiiska oo ay nuqul kamid ah heshay PTIMES
Dhismaha Golaha baarlamaanka ee Jubbaland ayaa sidaan oo kale looga hadlay, waxaana kamid ahaa qodobada.
“Golaha wakiilada gobolka waa in uu noqdaa mid loo dhanyahay, islamarkaasina matala dhamaan beelaha iyo degmooyinka, waxaana soo xulaya odayaasha dhaqanka, qeybinta kuraasta waxaa la tixgalinayaa qoondada jaango’an marka laga hadlayo degmooyinka. Xeerka iyo qaanuunka uu ku dhaqmayo maamulkani waa in uu noqdaa mid waafaqsan dastuurka KMG ah ee Federaalka, waxayna tahay in xeerkaasi uu ansixiyaa baarlamaanka Federaalka ee Soomaaliya”
Sidda muuqata heshiiskan gabi ahaantiis ma noqon mid hirgala, marka laga reebo in heshiis ay gaareen dhinacyadii xiligaas isku hayay awooda Jubbaland, waana tan keentay in ay markale maanta iska horyimaadaan dawladda Faderaalka ee Muqdisho & Jubbaland, taas oo ay dad badan u arkaan halis weyn oo soo laabatay.
Talaabooyinkii u dambeeyey oo ay qaaday dawladda Soomaaliya ayaa loo arkaa mid muujinaysa in ay adeegsanayso diblumaasiyad iyo dagaal adag oo ay la galayso Axmed Madoobe oo ay ka soo horjeedo, ayna u aragto in uu meesha baneeyo.
Jaalle Weriye Faarax aad ugu faraxsanahay inaad dib u fiirisey Xaqiiqada dhabta ah iyo waxaay soo martay Arrimaha Quseeya Gobolada hadda lagu magacaabo Jubbaland.
Xaqiiqada dhabtana waa sida aad u sheegtay, in kastoo hal arrin oo ah dhismaha maamulka ku meel gaarka ah in dhinacyadii iska soo horjeeday la heshiisiiyey taas kuguma raacsani, laakiin sida aad u xustay Heshiishka Qodobada ugu muhiim Sanaa waa sida aad u xustay adigoo sidii ay ahaayeen aad u xustay waana Arrin looga baahan yahay in dadka Soomaaliyeed runta wehel ka dhigtaan.
Heshiishka ku sheegga raggii waday qaab Qabiil ugu hawl galay islamarkaana isticmaalay Awoodda laba dowladood oo deris la ah Soomaaliya waana Kenya iyo Ethoipia iyo waddamo kale oo dhabarka dembe ka taagnaa Kenya iyo Ethiopia, waddamadaas oo Mar walba garab taagan Kenya iyo Ethoipia taas oo sababo badan leh, Tusaale haddii aan ku xuso halkaan.
Waxaa jirey markii shaqadii uu hayey laga joojiyey Ra’iisulwasaare Maxamed Cabdullahi Farmaajo, waa Madaxweynaha Soomaaliya waqtigaan hadda ah, ayaa waxaa wareysi lala yeeshay qofka mid ah Wasaaradda Arrimaha Dibedda ee Talyaaniga waxaay tiri waa qalad in loo diro gurigiisa waayo bay tiri waxaa uu qabtay muddo Lix Bilood ah waa ” MIRACLE” marka loo eego Xaaladda Soomaaliya ayey yiri, waxaa kale bay tiri taas oo aan doonaya inaad fahantaan xaaladaha u eg kuwo dahsoon laakiin aniga igama dahsoona,
Waxaay tiri Arrimaha Siyaasadda Soomaaliya waxaan wax ka weydiinaa Ethiopia, waxaayna noo sheegeen in laba Shariif midna yahay Secular Person, midna tahay Religious Person >>>> secular waa Shariif sakiin ninka lagu sheegay, ninka wadaadka lagu sheegayna waa Sheikh Shariif Sheikh Axmed, labadooduna mid ahaa Guddoomiyihii Baarlamaankii 8aad,midna ahaa Madaxweynihii ku meel gaarka ahaa Dowladda Federalka ah.
Taas waxaan ula jeedaa in kooxda Xoogga ku haysta kismaayo iney ku yimaadeen rabitaanka Kenya iyo Xukumaddii Tigree.
Soomaalidu waxaay tiraahdaa Islaantii maxaad ku ogeyd Indho la’aan, laakiin hadda waxaay ku darsatey Dad Cunnimo!
Axmed Kenyatta wuxuu ku darsaday dabadhilifnimo iyo Qaa’imiin waddanimo
Waana waxa ka taagan kismaayo waqtiga xaadirka ah.
Kismaayo waxaay ku jirtaa Gacanta Kenya, Dowladda Soomaaliyana waxaay dooneysaa iney ku soo celiso Gacanta ummadda Soomaaliyeed.
Waa in sidaa loo fahmaa.
Mar xaaladda aan galay ee soo celinta Dowladnimada Soomaaliya, ciddii aan la jaan qaadi karin waa iney iska nasataa.
Isbedel baa dhacay kana dhacay soomaaliya 02/08/2017.
Ciddii aan la qabsan karin dadaalka ay waddo dowladdu waa iney hawlaheeda gaarka ah qabsataa, waa Haddii aysan la qabsan karin soo celinta Dowladnimada Soomaaliya iyo dib u dhiska dowladnimada Soomaaliya.